မေတ္တာကြယ်စင်: ဝမ်းမြောက်စကားနှင့် နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလွှာ
မူလစာမျက်နှာ၊ ကဗျာ၊ဟာသ၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ခရီးသွား၊ ခံစားမှု၊ ဘာသာပြန်
မူလစာမျက်နှာ၊ ကဗျာ၊ ဟာသ၊ ၀တ္ထ၊ ဆောင်းပါး၊ ဘာသာပြန်
16.11.14 Sunday အမျိုးသားနေ့က ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ စိတ္တပါလဂူကျောင်းစာသင်တိုက်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်၊ အာစရိယပူဇော်ပွဲတွင် စာချဆရာတော်ဦးမာဃိန္ဒရေးသားဖတ်ကြားသွားသော ဝမ်းမြောက်စကားနဲ့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလွှာကို သဘောကျ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်သည်။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ စိမ်းလန်းစိုပြေ ကောင်းဒီတောင်ခြေ ရင်းမှာတည်ရှိတဲ့ စိတ္တပါလဂူကျောင်းစာသင်တိုက်မှာ ပညာရည်နို့သောက်စို့ခဲ့ဖူးကြတဲ့ အနီး အဝေးအနယ်နယ်၊ အရပ်ရပ်ကနေ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲကို ကြွရောက် လာကြတဲ့ ညီတော်၊ နောင်တော်၊ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား.......။
အခုလို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲကို စိတ်ရောကိုယ်ပါဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြွရောက်လာကြတဲ့အတွက် ဘုရားတပည့်တော် ဖော်မပြတတ်အောင် ဝမ်းသာကြည်နူးဖြစ်မိပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့တစ်တွေဟာ ဒီနေရာ၊ ဒီဌာနမှာ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေ ရဲ့ အရိပ်အာဝါသကို ခိုလှုံပြီး ပရိယတ္တိစာပေတွေကိုလည်း သင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ ဆရာ တော်ကြီးရဲ့ မမေ့နိုင်လောက်အောင် ရင်ထဲမှာ စွဲကျန်သွားစေနိုင်တဲ့ ဆိုဆုံးမဩဝါဒတွေကို လည်း ခံယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ ဒါ့အပြင် ဝိနည်းအရာမှာ လိမ္မာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်ပီသစွာနဲ့ တပည့်များရှေ့မှာ စံပြအဖြစ် နေထိုင်ကျင့်သုံးသွားတော်မူခဲ့တာကိုလည်း ဖူးမြော်ကြည်ညိုခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် တပည့်တော်တို့အဖို့ စံနမူနာကောင်းတွေကို အားကျအတုယူခွင့်တွေ ရခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီ စံနမူနာကောင်းတွေ၊ ဩဝါဒတွေရဲ့အောက်မှာ လူလားမြောက်ခဲ့ရသည့်အတွက် တပည့်တော်တို့တစ်တွေဟာ လောက၊ သာသနာ ဌာနနှစ်ဖြာမှာ တင့်တယ်စွာနေထိုင်နိုင် ကြတယ်လို့လည်း ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်ကြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခုလက်ရှိ အပူဇော်ခံဆရာတော်များကလည်း ဘုရားတပည့်တော်နဲ့ အခုကြွရောက်လာကြ တဲ့ သံဃာတော်များကို ပရိယတ္တိပညာတွေ သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အပြင် ရဟန်းပရိသတ်၊ လူပရိ သတ်အလယ်မှာ ဝိနည်းတော်နဲ့အညီ သွားလာနေထိုင်တတ်အောင် ဆိုဆုံးမဩဝါဒတွေ၊ အနု သာသနကထာတွေကို ဟောပြောပြသဆိုဆုံးမလျက်ရှိတာကိုလည်း တပည့်တော်တို့အားလုံး ဖူးမြော်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်ဘုရား။
ဒါကြောင့်မို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ ကျေးဇူးတော်အနန္တကို ဘုရား တပည့်တော်တို့ တပည့်များအနေနဲ့ သုံးနှစ်တစ်ကြိမ် အာမိသပူဇာ၊ ဓမ္မပူဇာနှစ်မျိုးတို့နဲ့ ကျေးဇူး ဆပ်ခွင့်၊ ပူဇော်ခွင့်ရခဲ့ရတာကို ဘုရားတပည့်တော်နှင့် ကြွရောက်လာကြတဲ့ သံဃာတော်များ နှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်များပါမကျန် အလွန့်အလွန် ဝမ်းသာကြည်နူးနေရမှာပါဘုရား။
ကတညုတ-ကတဝေဒီ စကားလုံးနှစ်လုံးကို အရှင်ဘုရားတို့လည်း တတ်သိနားလည် ပြီးသားမို့ အထူးအကျယ်ချဲ့ပြီး လျှောက်ထားဖွယ်မလိုဘူးလို့ ထင်မြင်မိပါတယ်ဘုရား။ အထူး လျှောက်ထားဖွယ် မလိုသော်လည်းပဲ တပည့်တော်တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝကို ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့် စေချင်ပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဟာ သစ်ပင်တွေ၊ ငှက်တွေနဲ့ တူပါတယ်ဘုရား။ သစ်တစ် ပင်ရဲ့ အကိုင်းအခက်၊ အသီးအပွင့်တွေ စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရတာဟာ ရေသောက်မြစ် တွေ ကောင်းခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်တွေဟာလည်း အတောင်မစုံသေးခင်မှာ မိခင်ရဲ့ရင်ငွေ့ကို ခိုလှုံပြီး ရှင်သန်ကြီးထွားကြရပါတယ်။ အတောင်စုံမှ လိုရာကို ပြန်သန်းသွားကြပါတယ်။ တပည့်တော်တို့တစ်တွေလည်းပဲ သစ်ပင်များ၊ ငှက်များလိုပါပဲဘုရား။ တပည့်တော်တို့ဘဝ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်အခက်အလက်တွေနဲ့ ဝေဆာလှပစေရန် ပရိယတ္တိစာပေရဲ့ အခြေခံ ရေသောက်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ပရိတ်ကြီး၊ ဝိနည်း၊ သဒ္ဒါ၊ သင်္ဂြိုလ်၊ ညဝါစတာတွေကိုလည်း သင်ကြား ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ဘဝ အတောင်မစုံသေးခင်မှာ ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော် ကြီးတွေရဲ့နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာ၊ ကရုဏာရင်ငွေ့တွေရဲ့အောက်မှာ ခုံလှုံခဲ့ရပါတယ်ဘုရား။ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ နည်းနာနိဿယတွေနဲ့ ရှင်သန်ကြီးထွားလာပြီး အတောင်စုံတော့ တပည့်တော်တို့ လိုရာကို ပျံသန်းခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကို တပည့်တော်တို့အားလုံး သဘော ပေါက်နားလည်ကြတယ်လို့ ထင်မြင်ပါတယ်ဘုရား။
အဲသလိုမျိုး တပည့်တော်တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ ကြီးလာတဲ့အခါ တွေ့ကြုံလာရတဲ့ ဖြစ် စဉ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးမြင်လာတတ်ပြီဆိုရင် ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ အခုလက်ရှိ အပူဇော်ခံဆရာတော်တွေရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို ဆပ်လို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘုရား တပည့်တော် ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်ဘုရား။
အာစရိယပူဇော်ပွဲကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ညီတော်၊ နောင်တော် များဘုရား......။ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသမားတွေ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ သာသာနာတော်ကြီးဟာ ယခုအခါ တပည့်တော်တို့ရဲ့ပခုံးပေါ် လွှဲပြောင်းရောက်ရှိ လာပါပြီဘုရား။ တပည့်တော်တို့လက်ထဲရောက်လာတဲ့ သာသနာတော်ကြီးကို နေလို၊ လလို ထွန်းလင်းတောက်ပလာစေရန် တပည့်တော်တို့မှာ ကြိုးစားရမယ့်တာဝန်တွေ ကိုယ်စီရှိကြပါ တယ်ဘုရား။
ခေတ်ကလည်း သိပ္ပံခေတ်ဆိုတော့ အရှင်ဘုရားတို့ သိတဲ့၊ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဘုရား။ အရာရာဟာ မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အဖက်ဖက်က တိုး တက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ အခုလိုခေတ်ကြီးမှာ တပည့်တော်တို့ရဲ့ သာသနာတော်ကြီးကို ခေတ် စနစ်တွေနဲ့အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်၊ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာမှာ ကိုယ့်သာသနာကို ဘယ်လို ထွန်းကားအောင် ဆောင်ရွက်ရင် ကောင်းမလဲ၊ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကို သာသနာတော်မှာ ပျော် ပိုက်အောင်မွေးမြူရင် ကောင်းမလဲ၊ ဘယ်လိုစီမံအုပ်ချုပ်ရင် ကောင်းမလဲ၊ တပည့်တော်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဗုဒ္ဓစာပေတွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင် ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရင် ကောင်းမလဲလို့ ကြံစည်စဉ်းစားဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်ဘုရား။
အနာဂတ်သာသနာတော်ကြီး စည်ပင်ဖို့အရေးတွေကို အချိန်တွေ မနှောင်းသေးခင်မှာ သာသနာအရေး ကိုယ့်အရေးလို့ ယောနိသောမနသီကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်စွာနဲ့ ကြံစည်စဉ်း စားပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ကိုလည်း ဘုရားတပည့်တော် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်ဘုရား။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ စိတ္တပါလနွယ်ဖွား ညီတော်၊ နောင်တော်များနဲ့ သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်ဆရာလေးများပါမကျန် သိဿာနုသိဿနိကာယအသင်းကြီးမှာ ပိုတာတွေ ရှိရင် ပယ်နုတ်ပြီး လိုအပ်တာတွေရှိရင်လည်း အကြံဥာဏ်များပေးကြဖို့နဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ မပြည့်စုံတာလေးတွေရှိရင်လည်း သည်းခံခွင့်လွတ်ကြဖို့ လျှောက်ထား ရင်းနဲ့ လာမယ့် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တတိယအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ ပြန်လည်ဆုံ တွေ့ကြပါစို့လို့ ဆန္ဒပြုရင်း......တပည့်တော်ရဲ့ ဝမ်းမြောက်စကားနဲ့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလွှာကို နိဂုံးချုပ်ပါတယ်ဘုရား။
Posted by ဘိက္ခုဇိန at 12:28 PM
Time of Myanmar
16.11.14 Sunday အမျိုးသားနေ့က ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ စိတ္တပါလဂူကျောင်းစာသင်တိုက်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်၊ အာစရိယပူဇော်ပွဲတွင် စာချဆရာတော်ဦ...
The Traders of Seriva Seri-Vanija Jataka
It was while staying in Savatthi that the Buddha told this story to encourageadisheartened bhikkhu to persevere so that...
၂၂.၄.၂၀၁၃ နေ့တွင် ကျောက်ဆည်ကနေ မိတ္ထီလာသို့ ခရီးတစ်ခေါက် ပြန်ရောက်ခဲ့ တယ်။ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ၊ မီးရှို့ခံထားရတဲ့ အ...
ရွှီး…ရွှီး…ဖြန်း…. မှန်တံခါးကို သစ်ကိုင်းများက လာရိုက်နေသည်။ သစ်ရွက်စိမ်းများ ကပ်ကျန်နေခဲ့သည်။ အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေ၏။ ...
အလွန်းလို့ ချပစ်တာ စာရေးသူ မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှာ စာသင်နေတုန်းကပေါ့။ တစ်ညနေခင်းမှာ စာသင်သားကိုယ်တော်တွေက ဆ...
ချင်းပြည်နယ်က လွမ်းမောဖွယ်ရာ ချင်းရွာတစ်ရွာ မောင်ရှိန်းဗွေ တစ်ယောက် ကျောင်းပေါ်ရောက်နေတာ နေကုန်တော့မည်။ ဘာကိစ္စ လည်း မေးမရ။ ကိုယ်မေး...
စူဠသောတာပန်တဲ့ စာရေးသူတို့ နယ်ဘက်မှာ တရားဓမ္မလွန်စွာလိုက်စားတဲ့ ဒကာကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူက အဘိဓမ္မာနဲ့ ၀ိပဿနာတေ...
သက်သေပြလိုက်ပုံက တစ်ခါက ပဋ္ဌာန်းပွဲတစ်ခုမှာပါ။ ပဋ္ဌာန်းအော်ရွတ်ရတဲ့အရှိန်နဲ့ ညရောက်တော့ ဗိုက်ဆာလာပါတယ်။ ဒကာမတစ်ယောက်က ဂျင်းသုပ်လာကပ်ရာ ခပ်ဝ...
Buddhist Concept of Asthetic or Beauty
Buddhist Concept of Asthetic or Beauty Aesthetic is very important as far as personality because every person have two aspects of ...
Bodhipūjā or Psychiatric elements in Buddhist Culture
Every body in the world has been facing many diseases. All diseases can be briefly divided into two parts. They are physical disease an...